ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးစက်ရုံ - တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Professional Respirator မျက်နှာဖုံး Ffp3
Particulate respirators များသည် ၀ တ်ဆင်ရန်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ရန်ထိရောက်ပြီးအသက်ရှူမှုခုခံနိုင်စွမ်းကိုနိမ့်ကျစေပြီး၎င်းတို့ကိုအလွန်လက်တွေ့ကျစေပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ဤ FFP3 NR အမှုန်အသက်ရှူစက်သည်အဆို့ရှင်နှင့်ခေါက်ထားသော ၄ ထပ်အလွှာပါသောတစ်ခြမ်းပါမျက်နှာဖုံးဖြစ်ပြီးချိန်ညှိနိုင်သောခေါင်းစည်း၊ အတွင်းပိုင်းပျော့နှာခေါင်းအမြှုပ်နှင့်သတ္တုနှာခေါင်းညှပ်ပါ ၀ င်သည်။ နူးညံ့သော intranasal foam သည် ၁. တိုးတက်လာသောမျက်နှာတံဆိပ် ၂. ဝတ်ဆင်သူကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေခြင်း ၃. ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထီးကျန်ချိန်ညှိနိုင်သော elastic headband ကိုပေးသည်။
အလွှာ ၃ လွှာပါ ၀ င်သောလေ ၀ င်လေထွက် ၃ လွှာသည်လေ ၀ င်လေအမှုန်လေးများအားပိတ်ဆို့စေပြီး Mask ၀ တ်ခြင်းမှအညစ်အကြေးများကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။
စဉ်းစားစရာဒီဇိုင်း - ထည့်ထားသောနှာခေါင်းကလစ်သည်နှာခေါင်းတံတားနှင့်အံ ၀ င်စေပြီးမျက်မှန်ပေါ်တွင်မှုန်မှုန်များကိုကူညီနိုင်သည်။ Elastic ear loops: အလွန်မြင့်မားသော elastic ear loops များသည်နားနှင့်မျက်နှာကိုဖိအားအနည်းငယ်ပေးပြီးရေရှည်သုံးခြင်းနှင့် တွဲ၍ အဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အိမ်အတွက်ဆောင်ထားရမည့်အချက်များ၊ နေ့စဉ်သုံးအတွက်အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းနှင့်ပြင်ပ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဖြည့်စွက်ပါ။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သုံးနိုင်သောအဆင့် ၁ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများကိုခွဲစိတ်သော်လည်းကောင်း၊ အန္တရာယ်များသောအခြေအနေများတွင်ဖြစ်စေ၊ အရည်များနှင့်ကူးစက်နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုအန္တရာယ်မြင့်မားသောအခြေအနေများတွင်မသုံးသင့်ပါ။
၎င်းတို့သည်အဆင့် ၁ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများဖြစ်ပြီး FDA 501 (k) အစီရင်ခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤထုတ်ကုန်များကို FDA မှတ်ပုံတင်ထားသောထုတ်လုပ်သူများမှပြုလုပ်သည်
၃ လွှာပါ ၀ င်သောယက်မထည်သည်ကောင်းမွန်သောစစ်ထုတ်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအသက်ရှူနိုင်စွမ်းရှိသည်
【ကုန်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု】: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မျက်နှာဖုံးတွင်မျက်နှာဖုံးကိုယ်ထည် (အပြင်ဘက်အလွှာ၊ အလယ်လွှာ၊ အတွင်းလွှာ)၊ မျက်နှာဖုံးခါးပတ်၊ နှာခေါင်းညှပ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ မျက်နှာဖုံးကိုယ်ထည်နှင့်အပြင်ဘက်ကို polypropylene spunbond nonwoven material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလယ်လွှာကို polypropylene electrostatic meltblown nonwoven material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာဖုံးခါးပတ်၏ပစ္စည်းသည် polypropylene spunbond nonwoven ဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းညှပ်သည် polyethylene နှင့်သံဝါယာကြိုးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုပိုးသတ်ထားသောပုံစံဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
အောက်ခြေနှင့်အပေါ်ဆုံးအလွှာများကို polypropylene spunbond non-woven fabric နှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလယ်တွင်အပူအလွှာဖြင့် polypropylene electrostatic meltblown non-woven fabric ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။